बालुवाटारबाट अयोध्याका लागि राम-सीताका मूर्ति हस्तान्तरण । – Yuwa Aawaj
बैसाख ७, २०७८ मंगलबार 442
Prevबधाई ! शर्मा प्रधानसेनापति बन्दै !
Nextनेपलामा फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै, के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ?
डा.खिमलाल भन्नुहुन्छ : प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ ।
कञ्चनपुरकी २३ वर्षिय अदिति जोशी आ’स्ताइन् हस्पिटलको बेडमा ।